KWES APR AP APOSTOLIC CATHOLIC PALMARIAN CHURCH TIMELINE
1946 (Eprel 23): Clemente Domínguez Gómez mụrụ na Seville.
1968 (March 30): girlsmụ agbọghọ anọ kọrọ na ha hụrụ Virgin Mary na Alcaparrosa. ubi ahụ, ná mpụga Palmar de Troya, bụ́ obodo dị na Spen Andalusia.
1968 (Eprel gaa n'ihu): Ọtụtụ ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ nwanyị, kwuru na ha natara ọhụụ na saịtị ahụ. Akụkọ ndị ahụ dọtara ọtụtụ ìgwè mmadụ si n'ógbè ahụ, n'akụkụ ndị ọzọ nke Spain, na ndị si mba ọzọ.
1968 (Ọktọba 15). Clemente Domínguez Gómez na enyi ya Manuel Alonso Corral si Seville gara leta saịtị ahụ maka oge mbụ.
1969 (Septemba 30). Clemente nwere ọhụụ mbụ ya (nke Christ na Padre Pio).
1969 (Disemba 15). Clemente nwere ọhụụ mbụ ya banyere Virgin Mary.
1970 (May 18): Achịbishọp nke Seville, Kadịnal José María Bueno Monreal kwupụtara nkwupụta ziri ezi banyere ngosipụta ahụ.
1972 (18 Machị). Achịbishọp nke Seville kwughachiri nkatọ ya na ngosipụta ma machibido ụdị okpukpe Katọlik niile n'ọhịa Alcaparrosa.
1972 (May 9): Clemente kwusara na ọ ga-abụrịrị onye ezigbo pope na onye na-anọchi anya Paul VI.
1972: Clemente na ezigbo ndị na-eso ụzọ ya malitere ịkọwa onwe ha dịka ndịozi Marian ma ọ bụ Ndịozi nke obe.
1974: Clemente na Manuel nwetara ubi Alcaparrosa. E wuru ụlọ arụsị sara mbara karị na mgbidi gbara ya gburugburu.
1975 (Disemba 22): Iwu ntọala Palmarian, ndị Carmel nke Holy Face, hiwere.
1976 (Jenụwarị 1): Achịbishọp Pierre-Martin Ngô-Dinh-Thuc Thuc họpụtara ndị nchụàjà anọ na Palmar de Troya, gụnyere Clemente na Manuel.
1976 (Jenụwarị 11): Thuc doro ndị bishọp ise nsọ na Palmar de Troya, gụnyere Clemente na Manuel.
1976 (Jenụwarị 14): Achịbishọp Bueno kwupụtara na echichi ndị a na-edoghị anya na ndị bishọp ọhụrụ e doro nsọ kwụsịtụrụ.
1976 (Jenụwarị 15): Ndị popu nuncio chụpụrụ ndị niile so na ntinye aka na Spain.
1976-1978: Ndị bishọp Palmarian doro ihe karịrị ndị bishọp iri itoolu.
1976 (May 29): Ndị bishọp Palmarian tinyere aka na ihe mberede ụgbọ ala na mba Basque. Clemente merụrụ ahụ nke ukwuu, o wee kpuo ìsì.
1976 (August 4): Clemente natara ozi na ọ ga-abụ popu mgbe Paul VI nwụsịrị.
1978 (August 6): Pope Paul VI nwụrụ.
1978 (August 6): Mgbe ọ nọ na Bogotá, Colombia, Clemente kwuru na ọ bụ Kraịst kpuchiri ya okpueze ma kpọọ aha Gregory XVII.
1978 (August 9): Clemente laghachiri na Spen na a kpọpụrụ Holy See n'ụzọ chiri anya na Rome gaa Palmar de Troya. E hiwere Holy Apostolic Catholic Palmarian Church.
1978 (August 15): Gregory XVII bụ onye kadinal ọhụrụ ahọpụtara ọhụrụ.
1980 (March 30): E hiwere Council Palmarian. Mgbe mmeghe ya gasịrị, Palmarian ahụ Credo e bipụtara.
1983 (October 9): Akwụkwọ akụkọ Latin-Tridentine-Palmarian nke dị mkpirikpi dochiri ọdịnala Tridentine ọdịnala.
1987 (November 2): Supremelọikpe Kasị Elu nke Spain nyere ndị isi chọọchị Palmarian ọkwa dị ka nzukọ okpukpe.
1992 (October 12): E mechiri ọgbakọ ndị Palmarian. Na Agwọ na Mass bụ isi ihe ọ rụpụtara.
1997-2001: Emere synod mbụ Palmarian. Akụkọ dị nsọ ma ọ bụ Akwụkwọ Nsọ Palmarian bụ isi ihe ọ rụpụtara.
2000 (November 5): Gregory XVII chụpụrụ ndị bishọp iri na asatọ na ndị nọn asaa. Offọdụ n'ime ha chọtara otu ọgbakọ Palmarian nwere onwe ya na Archidona, Andalusia.
2005 (March 21): Pope Gregory XVII nwụrụ.
2005 (March 24): Fada Isidoro María (Manuel Alonso) bu onye okpu pope were were Peter nke Abụọ dika aha papal ya.
2011 (July 15): Peter II nwụrụ.
2011 (July 17): Fada Sergio María, Ginés Jesús Hernández Martínez, bụ onye okpueze dị ka poopu nke atọ nke Palmarian. Ọ kpọrọ Gregory XVIII dị ka aha papal ya.
2012 (Jenụwarị 6): E hiwere ọgbakọ nke abụọ nke Palmarian.
2016 (Eprel 22): Gregory XVIII hapụrụ papacy na Palmarian Church.
2016 (Eprel 23): Onye odeakwụkwọ nke State, Bishop Eliseo María ‒ Markus Josef Odermatt ‒ ghọrọ poopu Palmarian ọhụrụ-Peter III.
2016 (Eprel 27): Onye bụbu pope, nke na-ejizi aha obodo ya bụ Ginés Jesús Hernández, gbara ajụjụ ọnụ nke mbụ ya na ndị mgbasa ozi Spanish wee kwupụta na ọ hapụrụ ụka Palmarian mgbe ọ matara na ọ bụ aghụghọ ma na ya na ya bi ugbu a otu nwanyị, Nieves Triviño.
2016 (Mee 2): N’akwụkwọ ozi ozi mbụ ya, Pope Peter III gwara onye Palmarian kwesịrị ntụkwasị obi na onye bụbu pope bụ “onye si n’ezi ofufe dapụ” na “anụ ọhịa a bụrụ ọnụ” ma bo ya ebubo na o zuru ego na ihe ndị bara uru n’ụlọ ụka ahụ tupu ọ pụọ.
2016 (June 29): Peter III kwupụtara mkpebi nke Council nke atọ nke Palmarian enweghị uru ọ bụla, n'ihi mmetụta nke pope nwere na ya.
2016 (July 16): Peter nke atọ bụ okpueze poopu na basilica na Palmar de Troya.
2016 (September 11): Ginés Hernández na Nieves Triviño lụrụ.
2018 (June 10): Hernández na Triviño rịgoro na mgbidi ụlọ ụka na Palmar de Troya, masked na njikere. Otu bishọp chọpụtara ha. Na ọgụ sochiri, Hernández merụrụ nnukwu ahụ, ebe bishọp na Triviño natara mmerụ ahụ na-esighi ike.
2018 (June 13): E jidere Hernández na Triviño maka "ohi ejikere agha na ọnọdụ na-eme ka ọ ka njọ." Mgbe ikpe ndị mbụ nke ụlọikpe gasịrị, a tụrụ ha abụọ mkpọrọ ka ha wee kpee ha ikpe.
ECHICHE GROUP / FOUND
Palmar de Troya, nke dị ihe dịka kilomita iri anọ na ndịda Seville biri na 1930s. Ka ọ na-erule ngwụsị 1960, obodo ahụ nwere ihe dị ka mmadụ 2,000 bi na ya. O nwere ọkụ eletrik mana ọ nwebeghị dọkịta na mmiri ọkụ. Ọ bụkwa akụkụ dị nta nke ụka, na-enweghị onye ụkọchukwu bi na ya ma ọ bụ ụlọ ụka na-adịgide adịgide. Mgbe onye nlekọta ahụ si n'obodo dị nso bịarute, a na-eme ememe okpukpe n'ụlọ mmadụ ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ bụ mmadụ ole na ole na-aga ụka mgbe niile, a na-ewere Palmar de Troya ka ọ bụrụ mpaghara ọrụ mgbasa ozi.
Na Machị 30, 1968, umuaka umuaka anọ (Ana, Josefa, Rafaela na Ana) gbara site na ndi gbara aho iri na otu rue iri na ato kwuru na ha huru “Nwanyi mara nma nke-uku” mgbe ha na anuru ifuru n’akuku osisi mastic.mastic) na ubi Alcaparrosa, ihe na-erughị otu kilomita site na etiti obodo. [Hụ ihe gbasara akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị Palmarianna akwukwọ ederede Poopu nke HaA kọwara nwanyị ahụ dị ka Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke. Site na Eprel 1968 gaa n'ihu, ndị ọzọ siri ọnwụ na ha nwere ahụmịhe dị omimi n'akụkụ osisi mastic. Ọtụtụ ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke dabara na ọkwa, na-ekwu na Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke pụtara ma gwa ha okwu. Ọtụtụ n'ime obi ụtọ a abụghị ụmụ amaala nke Palmar de Troya, kama o si ebe ndị ọzọ dị nso na mpaghara ahụ. Ozi nke elu-igwe ahụ a natara na Palmar de Troya n'oge mbido a na-adịkarị mkpụmkpụ ma n'ozuzu ya. Nwanyị Virgin ahụ gwara ndị ọhụụ na mmadụ niile kwesiri ikpe ekpere Nna anyị oge niile na rosary ma gbanwee n'okpukpe Katọlik ọdịnala. Ndị a bụ naanị ụzọ iji mee ka iwe dị ọkụ nke Chineke wee zọpụta ụmụ mmadụ. Akụkọ banyere ngosipụta ahụ gbasara ngwa ngwa n'akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ, na mba ọzọ. Ìgwè mmadụ ndị toro eto bịara ebe ahụ. N'ụbọchị ụfọdụ, ọkachasị na nke iri na ise n'ọnwa ọ bụla mgbe Virgin na-ekwukarị okwu dị mkpa, ha gụrụ puku kwuru puku.
Ka ọ na-erule ngwụsị nke 1969, Clemente Domínguez y Gómez (1946-2005) ghọrọ otu n'ime ndị ọhụụ kachasị emetụta na Palmar de Troya. Ka oge na-aga, ọtụtụ ga-ele ya anya dị ka onye kachasị mma, ebe ndị ọzọ ga-ewere ya dị ka onye adịgboroja ma ọ bụ ihe dị n'etiti. Mgbe ọ kwụsịrị ịga seminarị, ọ ghọrọ onye odeakwụkwọ n'ọfịs. Ọ rụụrụ ụlọ ọrụ Katọlik ọrụ na Seville oge ụfọdụ mana emesịrị chụọ ya n'ọrụ. Clemente abụghị otu n'ime ndị ọhụụ bụ ndị ọsụ ụzọ, mana na-amalite n'oge ọkọchị nke 1969, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị, ya na enyi ya, onye ọka iwu Manuel Alonso Corral (Palve de de Troya) gara 1934.
Dabere na akwụkwọ ndụ Palmarian hagio, Clemente nwere ọ ecụ ahụmahụ na ubi Alcaparrosa na August 15, 1969, na otu ọnwa na ọkara mgbe e mesịrị, na Septemba 30, ọ natara ọhụụ mbụ ya, nke Kraịst na onye Italiantali nwụrụ anwụ n'oge na-adịbeghị anya Capuchin Padre Pio. Na onwa Disemba asato, o bidoro nara ohuru nke Virgin Mary. Ọbụna ma ọ bụrụ na Clemente bụ onye natara nkwukọrịta nke eluigwe, ọ bụ enyi ya Manuel Alonso, bụ onye dekọtara ha na teepu, depụtaghachi ha ma kesara ndị njem ala nsọ. O doro anya na Clemente bụ onye na-adọrọ adọrọ na onye natara ozi nke eluigwe, ebe Manuel bụ onye nhazi.
Na ngosipụta dị iche iche, Virgin na Christ mere ka ọ mata na ọ bụ naanị otu ezigbo uka, bụ Tridentine Latin rite. Na novus ordo uka ekwuputara na 1969 abughi nkwulu. Ya mere, a ghaghachitere nnabata Latin nke Tridentine. Isiokwu ndị ọzọ pụtara ìhè bụ na ndị freemason na ndị komunizim abanyela Chọọchị Roman Katọlik n'ọtụtụ ọkwa. Ka o sina dị, dị ka Clemente si kwuo, Popu Paul nke Isii enweghị ikpe ọmụma ebe ọ na-agedụ ọgwụ ma na-ejide ya.
N'ime mbido afọ ndị 1970, Clemente Dominguez gara n'ihu na-anata ozi ọhụụ ọhụrụ. Manuel dere ha Alonso, ederede, depụtaghachi ma kesaa. A sụgharịrị ụfọdụ n'ime ha n'asụsụ Bekee, French na German dị ka akụkụ nke mgbasa mgbasa ozi gafere ókè Spain. Iji nwee ike ịme njem njem ozi ma hazie usoro ahụ, a chọrọ ego. Dika ihe akaebe si kwuo, Manuel Alonso bụ ezigbo onye na-agbakọ ego nke mere ka ụfọdụ ndị bara ọgaranya kwenye ịnye ego buru ibu. Nnukwu isi obodo ahụ pụtara na Clemente na Manuel nwere ike ịga njem n'akụkụ abụọ nke Atlantic. Site na 1971, ha gafere Western Europe, United States na mba dị iche iche na Latin America iji merie ndị mmadụ maka nsogbu Palmarian.
Palmar de Troya so na archdịọcese Seville ma ọ bịara doo anya n'oge na-adịghị anya na ndị Palmarian enweghị ike ịtụkwasị obi na nkwado ọ bụla site na achịbishọp, Kadịnal José María Bueno Monreal, onye ji obi ya niile nabata ndozigharị nke Vatican II ma tinye ha n'usoro. Yabụ, na ọ bụghị ezigbo onye otu ọ bụla maka otu ndị ọdịnala, ndị hụrụ Kansụl dịka isi ihe ọjọọ. Otú ọ dị, ruo afọ abụọ, Achịbishọp Bueno ekwughị ọkwa ọ bụla banyere ihe ndị ahụ, mana ọtụtụ ndị njem ala nsọ nọgidere na-abịa Palmar de Troya. A kọọrọ na ihe ruru mmadụ 40,000 bịara na May 15, 1970. Threebọchị atọ ka nke a oge niile, Bueno bipụtara otu akwụkwọ, ebe o kwuru nkenke banyere ihe ndị ahụ. O kwughị okwu mgbe ọ na-ekwu na ha bụ ihe ịrịba ama nke “nchikọta nke nkwenkwe na nkwenkwe ụgha”. E kwughachiri isi okwu nke achịbishọp Bueno kwuru na Palmar de Troya na 1972. Na iwu, ọ machibidoro n'ụzọ doro anya ụdị ofufe ọhaneze niile na mpaghara Alcaparrosa, na-enye iwu ka ndị ụkọchukwu Roman Katọlik ghara ịnọ, ma ya fọdụzie ime mmemme okpukpe ọ bụla n'ebe ahụ.
Otú ọ dị, enwere ihe akaebe doro anya na ndị ụkọchukwu Katọlik n'otu n'otu nọ na Palmar de Troya, tupu na mgbe amachara archbishop ahụ, na na a na-eme ọtụtụ ndị Tridentine ebe niile na saịtị ahụ site na 1969 gaa n'ihu. Otu nkwado ndị ụkọchukwu ahụ gụnyere ma ndị Spain ma ndị mba ọzọ, ndị na-akatọ ihe mepụtara na nnabata ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị ọhụụ na ndị isi nke usoro na-eto eto bụ ndị mmadụ na mbido 1970. N'ịbụ ndị na-enwe ihe ịga nke ọma n'ịchụso ego ha, na 1974, Clemente na Manuel nwere ike inweta saịtị ngosi ahụ wee si otú a na-achịkwa usoro ahụ. Mgbe nzụta ahụ, ha wuru ụlọ arụsị dịtụ nkọ karị, na mbido ụlọ yiri owuwu.
N’ọhụụ dị na Clemente na Nọvemba 30, 1975, Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke na Kraịst kwupụtara ntọala na-abịanụ nke usoro okpukpe ọhụrụ nke ga-anọchi ndị niile dị adị. Iwu Palmarian ọhụrụ ahụ, ndị Kamel nke Holy Face, bụ n’ezie hiwere ntọala na Disemba 22, 1975. Ọ gụnyere klas anọ nke ndị otu: ndị ụkọchukwu, ụmụnne nwoke, ụmụnne nwanyị na ndị isi. Ndị Palmarians enwebeghị ndị ụkọchukwu nke ha, n'ezie, na Achịbishọp Bueno nke Seville agaghị ahọpụta ha. Ka o sina dị, ọ dị oke mkpa ka otu a nwee ike ịzọ ọchịchị ndịozi.
Ngwọta nke nsogbu nhọpụta ahụ bịara na Archbishọp Vietnamese Pierre-Martin Ngô-dinh-Thuc (1897-1984). Mgbe otu n'ime oge Vatican nke Abụọ gasịrị, ọ nweghị ike ịlaghachi obodo ya wee biri na Itali. E doro Thuc nsọ bishọp na 1938 wee bụrụ achịbishọp nke Hue na 1960. Mgbe ọ bi na Europe, a gbanwere ya na Hue ma wee bụrụ achịbishọp dị egwu nke Bulla Regia. Otú ọ dị, ọ rụrụ ọrụ dị ka osote onye ụkọchukwu n'otu obere obodo Italiantali, na-ewe iwe ma na-agbagwoju ya anya na mgbanwe ndị gbanwere na chọọchị mgbe a nwụsịrị. Achịbishọp Thuc bịara Palmar de Troya site na mkpezi nke Maurice Revaz, onye kụziri iwu canon na seminarị nke ọdịnala Society of Pius X na Ecône. Revaz kwenyesiri ike Thuc na Virgin họọrọ ya iji zọpụta Chọọchị Katọlik pụọ na mbibi. Site na ọkwa dị mkpirikpi, ndị ụkọchukwu Vietnam wee gaa Seville na Palmar de Troya. N'abalị Afọ Ọhụrụ na 1976, ọ họpụtara Clemente Dominguez, Manuel Alonso, na ụmụ nwoke abụọ ndị ọzọ ịbụ ndị ụkọchukwu. Otú ọ dị, nhọpụta ndị nchụàjà bụ ihe mmalite. N'ihe na-erughị izu abụọ ka e mesịrị, na Jenụwarị 11, 1976, Thuc doro ndị Palmarian ise nsọ, ọzọ gụnyere Clemente na Manuel. Site na ntinye ndị episcopal, ndị Palmarian enwetawo nnukwu nnọchi nke ndịozi ma nwee ike ịmalite bishọp nke ha.
Ọ bụ ezie na ndị isi obodo nọ na-egbu oge ikwu okwu banyere ngosipụta ahụ, mmeghachi omume ha na echichi na ntinye nsọ bụ ozugbo. N’isochi echichi echichi nke Bishọp, Achịbishọp Bueno kwupụtara na ha adịghị n’usoro iwu ma kwụsịkwa ndị niile metụtara onye divin ma si otú a gbochie ịrụ ọrụ ọ bụla nke ụkọchukwu, ma na-ekwughachikwa ndị a sịrị na ha pụtara na Palmar de Troya. Na Jenụwarị 15, pope nuncio, Luigi Dadaglio, gara Seville ebe ọ kwupụtara na ndị bishọp Palmarian na Achịbishọp Thuc chụpụrụ site na oge ịchụ aja ( ipso facto ) na enweghi ikike di nkpa site na Holy See na ndi nkịtị. Na Septemba 1976, Nzukọ Dị Nsọ maka Ozizi Okwukwe na Rome kwupụtara na a kwụsịtụrụ ndị ụkọchukwu ipso iure (dika iwu Canon), mana ekwughi okwu doro anya banyere ma obu ihe ndi edoro nsọ abaghi ​​uru ma obu na ha adighi nma.
Ka ọ na-erule 1976, ndị Palmaria amalitelarị ndị isi ụka na-eto ngwa ngwa, na ihe na-erughị afọ abụọ, ha doro ndị bishọp iri itoolu na otu. Ọtụtụ n’ime ha bụ ndị Ayaland na ndị Spen, ebe ndị ọzọ si n’ọtụtụ mba dị na Amerịka na Yurop. Normalkpụrụ nkịtị n'oge a bụ na Clemente kwuru na ya natara ọhụụ site na Virgin ma ọ bụ Kraịst, na-arịọ ya ka o doo ndị bishọp ọzọ nsọ. N’ozi ndị ahụ, ọ rụtụkwara aka n’ụzọ doro anya onye e kwesịrị ime bishọp. Mmetụta nke modus operandi a bụ na ụmụ nwoke ndị batara dị ka ndị isi na Carmelites nke Holy Face nwere ike bụrụ ndị bishọp n'ime ọnwa, izu, ma ọ bụ ọbụlagodi ụbọchị. Ole na ole n'ime ndị bishọp Palmarian ndị e doro nsọ bụ ma ọ bụ bụrụbu ndị ụkọchukwu Roman Katọlik, ndị ọzọ agaala seminarị, ebe imirikiti bụ ụmụ agbọghọbịa. N'oge a, ndị Palmarian anaghị ewere onwe ha ụka dị iche iche mana dịka n'etiti ezi mmadụ ole na ole na-ekpe ụka Roman Katọlik.
Ka ọ na-erule mbido afọ ndị 1970, Clemente Domínguez ekwuola na Pope Popu nke Isii ga-anọchi ya ma ezigbo poopu ma antipope. Na 1976, ozi ndị ahụ bịara dokwuo anya, ọ na-egosi na a ga-enwe oge mgbe Catholicka Katọlik agaghị abụ Rome ọzọ. Banyere ọnọdụ nke Pope Paul VI, akụkọ Palmarian gbanwere oge. Fọdụ kwuru na ọ na-enye ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ na-ejide ya dị ka onye mkpọrọ na onye na-eme ihe nkiri dochie ya N'otu oge ahụ, a na-ekwu na Paul VI ga-abịarute ebe ahụ n'oge na-adịghị anya iji duru kọleji episcopal kwesịrị ntụkwasị obi ya, si otú a gbanahụ curia nke Rome.
Pope Paul nke Isii nwụrụ n'August 6, 1978. N'oge ahụ, Clemente na otu ndị bishọp nọ na Bogotá. Naanị awa mgbe ọnwụ nke Paul nke Isii, Clemente kwuru na ya abụrụla pope site na enyemaka Chineke kpọmkwem, na-ewere aha ya Gregory nke Iri na Abụọ. Mgbe ọ laghachiri na Seville, na Ọgọstụ 9, ọ kpọsara na Holy See si na Rome kwaga Palmar de Troya. Oge Rom nke ụka ahụ agaala ma guzosie Holy Catholic Apostolic Palmarian Church.
Emebeghị ka ọrụ ụka Palmarian ghara na Spain. Na mbido 1980s, enwere ndi bishọp ozi ala ọzọ na France, Germany, Austria, Switzerland, Ireland, Great Britain, Nigeria kamakwa na United States, Canada na mba dị iche iche na Caribbean na Latin America, ọkachasị Argentina, Mexico, Costa Rica , Peru, Chile na Colombia. N’O Oceania, e nwere ógbè ndị dị n’Australia na New Zealand. Offọdụ n'ime ebe ndị a nwere ụlọ ụka dị iche iche na ndị ụkọchukwu bi na ha. N'ọtụtụ ebe, Otú ọ dị, ndị Palmarian guzobere ihe a na-akpọ cenacle n'ụlọ ndị mmadụ, ndị ụkọchukwu na-eleta ha mgbe ụfọdụ. O siri ike ịkọ ndị otu nọ na ngwụcha 1970s na mbido 1980, mana ọ ga-abụrịrị puku ole na ole.
Enweghị akwụkwọ gọọmentị na-egosi mgbanwe ndị otu nọ na Church Palmarian. N'agbanyeghị nke ahụ, maka ndị bishọp, enwere data dị n'ime nke na-enye nkọwa doro anya. Na mkpokọta, ụmụ nwoke 192 bụ ndị bishọp Palmarian dị nsọ n'etiti 1976 na ọnwụ nke Gregory XVII na 2005. N'ime iri afọ atọ a, ọ dịkarịa ala 133 ahapụla iwu ahụ ma ọ bụ chụpụ, mmadụ iri abụọ na asaa nwụrụ n'ọfịs, naanị ndị bishọp iri atọ na abụọ. nọgidere dị ka nke 2005. Ngalaba nwanyị nke usoro ahụ, nke dị n'ogologo ya gụnyere ihe karịrị otu narị ndị nọn, nwere ike gbadata na iri atọ ma ọ bụ iri anọ na 2005, na ọdịda ahụ gara n'ihu. N'ime oge ụka Palmarian, ọtụtụ ndị bishọp, ndị ụkọchukwu, ndị nọn na ndị nkịtị hapụrụ ụka ahụ afọ ofufo ma ọ bụ chụpụ ha, ebe ndị ọhụụ batara. N'agbanyeghị nke ahụ, belụsọ na mbido, ọtụtụ ndị otu ọhụụ bụ ụmụ ndị di na nwunye Palmarian na ọ bụghị ndị na-abịa n'èzí.
Oge 1990 na mbido 2000s bụ oge ọgba aghara na chọọchị, jupụtara na ọrụ na ịchụpụ. Nsogbu a metụtara abụghị naanị nkuzi ọhụrụ nke ụka, kamakwa omume pope na ndị isi ndị ọzọ. Omume popu ghọrọ nsogbu esemokwu. Na 1997, o doro anya na Gregory XVII kwuru okwu n'ihu ọha, na-ekwupụta na ya emehiela megide iyi nke ịdị ọcha n'oge ya dị ka onye isi nke iwu ahụ. N'otu oge ahụ, o kwupụtara ị drinkingụbiga mmanya ókè na ị eatingụbiga mmanya ókè. N’ozizi ya afọ atọ ka nke ahụ gachara, poopu kwuru ihe doro anya banyere omume ọjọọ ya na mbụ, ma kwuo na ya agbanweela ụzọ ya.
Mpịakọta ise Akụkọ dị nsọ ma ọ bụ Bible Palmarian, nke e bipụtara na 2001, ghọrọ isi okwu ọzọ dị oké njọ. Ọ bụ ịkọwapụta akwụkwọ zuru oke nke Akwụkwọ Nsọ nke ọma dabere na mkpughe nzuzo nzuzo na-aga n'ihu na Gregory XVII. Ebumnuche nke idegharị ahụ bụ iji gosipụta ihe ederede ndị a pụtara n'ezie, dịka onye edemede Chineke si chee ha. Mgbe e mere ka ọha na eze pụta ọhụrụ, e nyere ndị kwesịrị ntụkwasị obi iwu ibibi Akwụkwọ Nsọ ọdịnala ha ma gụọ naanị nsụgharị Palmarian. Nkatọ megide mmepe a dugara n'ihu na ọrụ na nchụpụ.
N’ụzọ na-adọrọ mmasị, n’oge nke ọrụ na nchụpụ, ka ọ na-erule narị afọ iri nke otu narị afọ, e nwere otu akụkụ omume okpukpe papal nke gbanwere. Ọ bụghị kemgbe e guzobere Palmarian Council na 1980, mgbe nkuzi ghọrọ ihe ahaziri ahazi na ahaziri ahazi, nwere Gregory XVII ịdaba ọha nwee obi ụtọ, na-anata ozi eluigwe n'ihu ndị kwesịrị ntụkwasị obi. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ mere ọzọ mgbe 2000 gasịrị.
Anụ ọ ecụ ndị a ọha na eze bụ n'ezie ụzọ iji gosipụta ihe akaebe na-egosi na Kraịst na Nwa Agbọghọ ahụ nọkwa n'akụkụ nke Gregory, si otú a na-agbachitere ikike ọchịchị ya. Dị ka popu si kwuo, ndị kwesịrị ntụkwasị obi na chọọchị a na-ahụ anya n'okpuru ọchịchị ya zuru oke na-achọ ịbanye n'ime Igbe nzọpụta, bụ onye a ga-emechi ụzọ ya n'oge na-adịghị anya. N'echiche ya, onye na-ekpe ụka bụ obere ego, mana ọ gụnyere naanị ndị na-erubere uche Chineke isi (na papal).
Izu Nsọ dị na 2005 bụ oge dị oke mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke ụka Palmarian, dịka Gregory XVII nwụrụ na Machị 21. Mgbe ọ nwụrụ, ebe ahụ abụghị conclave dịka ọ kpọburu Fada Isidoro María (Manuel Alonso) onye ga-anọchi ya. Nke a bụ okpu eze na Machị 24, na-ewere Peter nke Abụọ dị ka aha papal ya. N’akwụkwọ ozi ndịozi ya nke mbụ, popu ọhụrụ ahụ gbachiteere ọkwá ya dị ka onye ga-anọchi Gregory nke Iri na Asatọ, onye e chiri akwụkwọ ozugbo. Peter nke Abụọ ekwughị na ọ ga-enweta ọhụụ ọ bụla ma lekwasị anya n'onwe ya dị ka onye na-agbachitere nkuzi Palmarian.
N'okpuru Peter nke Abụọ, ụka Palmarian bịara mechie ma kewapụ karịa ka ọ dị na mbụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ ogo na ọ bụghị ụdị. Ozi banyere mkpa ọ dị ịhapụ ụwa gbara ya gburugburu ma bie ndụ kwekọrọ n'ụkpụrụ Palmarian sirila dị na akwụkwọ ozi ọ bụla. N'ọtụtụ oge, Peter nke Abụọ kwughachiri echiche ahụ bụ na Palmarian Church bụ naanị olileanya dị n'ime ụwa nke Setan na-achịkwa. Ọbụghị naanị “ndị si n’ezi ofufe dapụ,” kamakwa ndị otu na-adị keara wereara ebubo na ha bibiri ụka n’ime. N’oge a na-achị ndị popu dị n’okpuru ndị isi, ọnụ ọgụgụ nke iwu zuru ezu rịrị elu nke ukwuu, ọtụtụ n’ime ndị okenye abụrụla nke siri ike karị. Ọtụtụ nwere uwe metụtara. Enwere ọtụtụ iwu ndị ọzọ na-amata ndị Palmarian na ihe ha hụrụ dị ka omume rụrụ arụ zuru ụwa ọnụ. A naghị ekwe ka ndị otu ụka votu na ntụli aka n’ozuzu ma ọ bụ banye n’ụlọ ụka nke ụka ndị ọzọ. A machibidoro ha ịbịa baptizim, agbamakwụkwọ ma ọ bụ olili nke ndị na-abụghị ndị Palmarian, gụnyere ndị ikwu. Ọbụna ihe dịkarịrị anya bụ mmachibido iwu zuru oke megide ịgwa ndị na-eyighị uwe Palmarian, ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị Palmarian nnukwu. Ndi otu gha agha imebi igwe onyonyo ha, vidio ha, ekwenti ha na komputa ha ka “oria ojoo ojoo juru ebe nile n’uwa” dika popu weputara ya.
Ọ na-esiri ike ịmara kpọmkwem otu ndị Palmarian si nwee ike ịchịkọta ụdị ego ahụ n'agbanyeghị agbanyeghị kama obere nzukọ. N'ime oge 1970s, 1980s ruo na 1990s, ụka Palmarian bara ọgaranya nke ukwuu n'ihi onyinye nke ndị otu na ndị na-enyere ya aka. Ndị mmadụ na-akwụ ụfọdụ n'ime ụgwọ ọnwa ha na chọọchị ahụ, ọ wee bụrụ onye na-erite uru na uche na agba ikpeazụ. Site na ego ahụ, ndị isi ahụ nwetara ihe dị ka ụlọ iri na obodo Seville, bụ ebe isi ụlọ na ndị isi nzụkọ. Ha nwekwara ike wulite nnukwu ụlọ ụka ahụ na ebe a hụrụ, Katidral-Basilica nke Virgin Crown anyị nke El Palmar, nke bụ otu n'ime ụlọ arụsị kacha ibu ewuru na Spain narị afọ nke iri abụọ. N'akuku ngwa ngwa okpukpe ndị a na-edebe n'ime Basilica, ego ya dịkarịa ala 100,000,000 Euro, ma eleghị anya ọ ga-akarị. N'ihi ịbelata ego na njedebe 1990s, ndị Palmarians rere ụlọ ha fọdụrụ na Seville na 2003. N'oge ahụ, ndị ụkọchukwu hapụrụ Palmar de Troya, ebe iwu ahụ zụrụ ihe dị ka ụlọ iri abụọ na 1970s. E wuru ụlọ ọhụrụ na ogige katidral ahụ. Palmar de Troya si otú a ghọọ ebe obibi ụka, ọ bụghị naanị nke ime mmụọ.
Mgbe afọ isii gachara n’ọkwa ọchịchị, Peter nke Abụọ nwụrụ na Julaị 15, 2011. Onye nọchiri ya bụ Bishọp Sergio María, onye bụbu onye isi ndị agha Ginés Jesús Hernández Martínez (b. 1959). Akpọrọ ya n’ihu ọha Peter II onye nọchiri anya ya na Machị 3, 2011. Popu ọhụrụ Palmarian ahụ bụ chiri okpueze na July 17, na-ewere aha ya bụ Gregory XVIII. N’oge na-adịghị anya mgbe echichi ahụ, popu ọhụrụ kpọkọbara Kansụl Palmarian ọhụrụ ka ọ bido na Jenụwarị 2012. N’oge ndị isi ụka nke Gregory XVIII, o yiri ka akụnụba Palmarian ọ ka mma nke ukwuu. Mgbe afọ iri kwụsịtụrụ, ọrụ ahụ na katidral bịara ngwa ngwa, ka ọ na-erule 2014, ọrụ owuwu ihe malitere na 1978 agwụchara.
Na Eprel 22, 2016, Gregory XVIII pụrụ na mberede pụọ pope na ụka Palmarian. Enye ikọkwọrọke ikọ inọ mbio obio ye mme andibuana ke ufọkn̄wed ke ata ibio ibio, enye ama ọkpọn̄ n̄kpọ emi ewetde ete ke imọ ibuọtke idem aba. Ọ gara biri na nwanyị, Nieves Triviño, onye bụbu onye nọn Palmarian, onye ya na ya nwere mmekọrịta oge ụfọdụ. Na Eprel 23, 2016, onye odeakwụkwọ nke Gregory, Switzerland Bishop Eliseo María ‒ Markus Josef Odermatt ‒ ghọrọ poopu n’aha Peter III. N’akwụkwọ ozi mbụ ya nke ịzụ atụrụ garagara Palmarian kwesịrị ntụkwasị obi, Peter nke Atọ kwupụtara na pope bụ “onye si n’ezi ofufe dapụ” na “anụ ọhịa a bụrụ ọnụ,” onye nwara ibibi ụka ahụ dum. Ọ kọwara pope nke Gregory dị ka ọchịchị aka ike. Peter III boro Hernández ebubo na o zuru ego, ọla, na ọmarịcha BMW (“pope-mobile”).
N'etiti Eprel na June 2016, Ginés Hernández nyere ọtụtụ ajụjụ ọnụ na mgbasa ozi Spanish, bụ nke o kwupụtara na Palmarian Church bụ nnukwu aghụghọ, nke e wuru na ụgha, mana na ọ dịbeghị anya ọ ghọtara ya. Otú ọ dị, o nyeghị ihe ọ bụla banyere ụdị ozi ọ zutere. Na Septemba 2016, Hernández na Triviño lụrụ. Tupu agbamakwụkwọ ahụ, ọ ga-abụrịrị ịgba ọtọ maka akwụkwọ akụkọ ndị Spanish.
Na June 10, 2018, Ginés Hernández na Nieves Triviño rịgoro n’elu mgbidi dị elu nke gbara ụlọ ụka ahụ gburugburu na Palmar de Troya. Ejiri ihu ha kpuchie, ma ọ dịkarịa ala, ha ji otu mma. Ha bukwa ngwongwo nwere ike imeghe uzo na nkpachi. Ọ bụ oge awa Mass ahụ, ndị isi, ndị sista na ndị nkịtị nọ n'ime katidral ahụ. Kaosinadị, bishọp Palmarian chọtara ha. Mgbe ahụ Hernández ji mma ma wakpo, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ egwu, bishọp ahụ, na ọgba aghara sochirinụ, mmadụ atọ niile merụrụ ahụ. Mgbe bishọp na Triviño nwetara obere mmebi, Hernández mara mma n'obi. Ruo oge ụfọdụ, ọnọdụ ya dị njọ. Otú ọ dị, ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị, e jidere ma Hernández na Triviño n'ihi “ohi e ji égbè ezu ohi na ọnọdụ ndị ka njọ,” mgbe a gbasasịrị ikpe ụlọikpe, a kpụgara ha abụọ n'ụlọ mkpọrọ, na-eche ikpe.
Taa (2018), ọnụ ọgụgụ nke ndị ụka ụka Palmarian ka dị obere, ikekwe ebe dị n'etiti 1,000 na 1,500. Ọtụtụ n’ime ha bi na Spen, Ireland, na Naịjirịa, mana enwekwara obodo nta Palmarian n’ọtụtụ ebe ndị ọzọ, gụnyere United States, Germany, Switzerland, Austria na ọtụtụ mba na Latin America. Ka ọ na-erule etiti 2016, Pope Peter III gwara ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ndị ụka Palmarian gụnyere ndị isi iri atọ na abụọ (ndị bishọp), bụ ndị nanị mmadụ asaa kwere nkwa ha n'ime iri afọ abụọ gara aga. Ndị nọn ahụ gụrụ iri anọ, mana ọ bụ naanị otu ụzọ n'ụzọ iri sonyere n'ime afọ iri abụọ gara aga nakwa na afọ ndụ ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri isii. Agbanyeghi na enweghi data obula, site na 2018 onu ogugu ndi nchuaja na nke ndi ebelata ebelatala nke ka nke, n'ihi onwu na enweghi oru ohuru. Na nkenke, Chọọchị Palmarian na-enwe nsogbu nke ndị otu.
Dị nnọọ ka Chọọchị Roman Katọlik, ndị Palmarian kwenyere na Kraịst guzobere sacrament asaa. Ka o sina dị, ha na-akụzikwara na na njedebe oge a, nhoputa ndi popu bụ sacramenti asatọ, nke anaghị ahụ anya, nke Kraist nyefere n'onwe ya. Otu ihe mbụ gbasara mmụta okpukpe sacramental nke Palmarian bụ na Virgin "ocheeze" ntakịrị ọbara ya n'ime ndị kwesịrị ntụkwasị obi na baptism ma ọ bụ ntughari Enwere ike iwusi idapu a, belata ma o bu tufuo kpam kpam dika onodu omume nke mmadu. Sacrament ahụ “chiri” ma mekwaa ka otu akụkụ nke obi Kraịst sie ike n’ime ndị kwesịrị ntụkwasị obi.
Baptizim bụ ọnụ ụzọ ụlọ ụka ahụ na sakramenti ndị ọzọ, ma kwesiri ka ụmụaka mee baptizim n’ime ụbọchị asatọ nke ọmụmụ ha. Site na baptism, nwatakiri (ma obu okenye) natara obara Mary, nke wepuru nmehie mbu. Baptism nke Palmarian nwere agwa a na-apụghị ịkọwapụta, mana ume nke nkedo ọbara nwere ike ịda mba. Ekwesiri inye oriri nsọ nke nkwenye na obere oge mgbe emechara baptizim. Ọ na - eme ka ọbara ọgbụgba dị ike ma mee ka onye ahụ dị ike n’ọgụ ọ na - alụso Setan. Ọ bụrụ na mmadụ emee kadinal, ọbara Meri ga-apụ n'anya. Nkwupụta bụ ụzọ iji banyeghachi na steeti amara.
O doro anya na Oriri Nsọ bụ sacrament kacha mkpa nye ndị Palmarian. N’ime iwu papal ya nke mbụ n’afọ 1978, Pope Gregory XVII kwupụtara na naanị usoro a ga-eji mee ihe bụ Tridentine mass nke Pius V, nke e hibere na 1570. Kaosinadị, obere oge ka nke ahụ gasịrị, ọ webatara ọtụtụ ihe ọhụrụ, na October 9, 1983, pope guzobere usoro nhazi nke Palmarian ọhụrụ, nke na-etinye uche na ntinye, ịchụ aja na udo nke onye ụkọchukwu were. Na nkenke, onye ụkọchukwu ọ bụla kwesịrị ịgụ ọtụtụ akwụkwọ ụbọchị; n'ezie, ha na-agụ ntụgharị nke ọtụtụ mmadụ ma ọ bụghị otu mmadụ. Dika ozizi Palmarian, aru, nkpuru obi na obara nke Kraist na Meri nọ na achịcha na mmanya a doro nsọ. Oriri na udo kwesiri iwere na ire ma onye anata ga-egbu ikpere n'ala mgbe ọ na-anata oriri nsọ.
Oriri nke ise nke ụka ahụ, njikọ ikpeazụ, na-eme ka mmekọrịta ndị kwesịrị ntụkwasị obi na Kraịst na Meri sie ike, na-eme ka ọbara ọbara nke Virgin ahụ dịkwuo elu. Na chọọchị Palmarian, e nwere ọkwa ọkwa nke ọkwa dị atọ: dikọn, ụkọchukwu na bishọp. Na emume, onye ụkọchukwu na-ebi na mkpụrụ obi Kraịst, nke a hụrụ n'ụdị obe na-enwu enwu. Asaa nke asaa nke Palmarian bụ alụm di na nwunye. Isi ihe kpatara ya bụ inye ụmụaka, ndị ọhụụ ọhụrụ, ụka. N'agbanyeghị nke ahụ, amaghị nwoke bụ ọnọdụ a họọrọ.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụka Palmarian ejirila ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ. Naanị n’agbata afọ 1978 na 1980, Gregory XVII kwuru na ihe dị ka mmadụ 1,400 a kpọrọ aha ha bụ ndị nsọ. Ndị nsọ dị ọtụtụ. Ha si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa wee nwụọ n'agbata narị afọ nke iri na otu na etiti afọ ndị 1970. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ bụ ndị Spen. Otu ụdị dị mkpa nke ndị nsọ Palmarian bụ ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị nọn e gburu n'oge Agha Obodo Spanish. Otu n'ime ndị nsọ ndị e debanyere aha na 1978 bụ onye ndu Spanish nwụrụ anwụ n'oge na-adịbeghị anya Francisco Franco, mana ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ na-esote na narị afọ nke iri abụọ dị ka onye ọchịchị Fascist José Antonio Primo de Rivera bụ ndị e buliri elu n'ebe ịchụàjà. Ndị nwụrụ n'okpukpe England, ndị e gburu n'oge mkpagbu nke narị afọ nke iri na isii na nke iri na asaa nke ndị Katọlik, bụ ìgwè ọzọ buru ibu, dịka ndị ozi ala ọzọ nwụrụ bụ ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ha na China na Indochina. Gregory nke Iri na Asatọ bizigakwara otu “ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ” nke ndị otu okwukwe Irish, ndị e gburu n'ihi okwukwe Katọlik ha.
Na ntọala ya na 1978, ụka Palmarian, nke akpọrọ Santa Iglesia Católica Apostólica y Palmariana na Orden Religiosa de los Carmelitas de la Santa Faz en Compañía de Jesús y María, enweworị usoro nhazi dị elu, nke isi poopu. Popu nwere ike zuru oke na chọọchị. Ọ bụ Nnukwu Onye Nchụàjà, Nnọchianya nke Kraịst na Onye Nọchiri Anya nke St. O nweghi nmehie obula mgbe o na-ekwuputa nkuzi ma nwee ikike ime mmụọ na nke anakpo n'eluigwe na ala. N'agbanyeghị nke ahụ, o doro anya na pope mbụ nke Palmarian, Gregory XVII na Manuel Alonso (Nna Isidoro María) bụ ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ. Clemente / Gregory bụ “igbe-olu” nke elu igwe na onye ndu na-adọrọ adọrọ, ebe Manuel / Isidoro María bụ onye ama ama nke ozi niile gafere.
Site na 1976 gaa n'ihu, ndị Palmarian doro ọtụtụ bishọp nsọ. Ndị ụkọchukwu Palmarian dị, mana o doro anya na ndị bishọp karịrị ha. Na ntọala ụka a na 1978, emere ka ọtụtụ ndị bishọp kadinal, ndị bụ ndị otu curia, nke onye isi ode akwụkwọ, Fada Isidoro María na-edu. Onye nke atọ n'ime ndị isi bụ osote onye odeakwụkwọ nke steeti Fada Elias María, onye ga-anọ ya rue ọnwụ ya na 1997. Onye ndu anọ nwere mmetụta bụ Fada Leandro, Camilo Estévez Puga, onye nwụrụ na 1999. Na 1987, Pope Gregory kwupụtara na kamgbe afọ 1978 ka o buliri bishọp iri itolu na asatọ na cardinalate. N'ime ndị bishọp-kadinal, ụfọdụ bụ ndị ụkọchukwu na-ahụ maka liturgy, nzuzo, ọrụ aka, ozi, mgbasa nke okwukwe na Njụta Okwukwe, ma họpụta ụfọdụ ndị achịbishọp, ndị nna ochie ma ọ bụ ndị isi ala. Ka o sina dị, na 1995, Gregory nke Iri na Abụọ kwụsịtụrụ cardinalate ahụ, n'afọ 2000 ọ họpụtara Fada Isidoro María dị ka onye nọchiri ya. Mgbe Gregory nwụsịrị na 2005, ọ ghọrọ popu, na-akpọ Peter II. N'oge onye isi okpukpe Peter II, Fada Sergio María bụ onye odeakwụkwọ nke Ọchịchị ma họpụta ya ka ọ nọchie ya. Mgbe Peter nwụrụ na 2011, ọ nọchiri ya dị ka popu ma were Gregory XVIII dị ka popu ya. Na Eprel 2016, Gregory XVII hapụrụ papacy na ụka Palmarian. Mgbe ahụ onye ode akwụkwọ nke Ọchịchị ya, Bishọp Eliseo María, nke ghọrọ Pope Peter III nọchiri ya.
N'ime oge ndị mbụ, enwere ihe dị ka otu narị ndị nọn na Iwu Kamel nke Holy Face, bụ ndị biri ndụ n'ime ogige dị egwu. Ọ bụ nne dị elu na-eduzi ha, nke a hụrụ dị ka onye isi General nke Order. Akwụkwọ ndị dị na-ekwu obere ihe banyere ọrụ ha.
Na ngwụsị afọ ndị 1970 na mmalite 1980s, akwụkwọ akụkọ Spanish bipụtara usoro ịgba akaebe site n'aka ndị bishọp mbụ nke ụka Palmarian. N'inwe ike ịnye echiche dị n'ime, ndị òtù mbụ gwara banyere ndụ siri ike nke dabere na nrubeisi kpuru isi nye ndị isi. N'ezie, popu na ezigbo ndị ikom ya nọ n'elu, ndị kadinal ndị ọzọ na-esote ya. Ndị ndu kachasị elu biri ndụ okomoko, na-eri nri ma na-ebi ndụ nke ọma. Ndị bishọp nkịtị, ndị ụkọchukwu na, ọkachasị ụmụnne ndị a họpụtaghị, biri na ọnọdụ mmekpa ahụ. Bọchị ndị sochiri atụmatụ siri ike ma na-eme ugboro ugboro, a na-achịkwa ndị òtù nke iwu ahụ mgbe niile, na-ehi ụra ma na-enye ha obere nri. Mmetụta uche na mmetọ anụ ahụ bụ ihe nkịtị.
Ọ bụ ezie na ndị ụkọchukwu anaghị eteta ruo elekere 8:30 nke ụtụtụ, ọrụ ha na-aga n'ihu ruo mgbe etiti abalị. Ka ha gachara uka ma rie nri ụtụtụ nke ụtụtụ, ndị ụkọchukwu ahụ kwụ n'ahịrị site na ebe obibi ndị nọn ha gaa n'isi ụlọ ọrụ dị na Seville, ebe a na-akpọ oku na ebe nkatọ ndị mmadụ na-eme megide onye ọ bụla nwere otu akụkụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, klas nke liturgy na Spanish malitere n'ihi na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahụ bụ ndị mba ọzọ. N’uhuruchi, ndị nọn na ndị ụkọchukwu niile, ma ọ bụghị popu, na-agakarị Palmar de Troya. E nwere ọha mmadụ ọhụrụ na omume nsọ, dị ka ikpe ekpere rosary na ịtụgharị uche na Stations of the Cross. Ha na-alaghachi na Seville mgbe etiti abalị gasịrị, mana ha na-ekpekarị ekpere n’obodo ahụ ọtụtụ awa. Mgbe nke ahụ gasị, ndị ụkọchukwu ahụ rahụrụ ụra awa ole na ole ruo echi ya amalite.
Ọ bụ ezie na ụlọ ndị Palmarian dị na Seville na-ele anya nke ọma site na mpụga ma bụrụkwa ebe dị n'etiti, ndị ụkọchukwu na ndị nọn bi na ime ụlọ. Dị ọrịa dị iche iche, ma nke anụ ahụ na nke mmụọ, bụ nke a na-ahụkarị. Ugboro ugboro, ndị isi ga-esi n'otu ụlọ gafee na nke ọzọ n'etiti abalị, dịka ọdịnaya nke ọhụụ popu. Otú ọ dị, na 1981, ụdị ngosipụta ndị a pụrụ n'anya, ebe obibi ha wee kwụsie ike karị.
N'afọ ndị sochirinụ, enwere ọtụtụ akaebe sitere na ndị bụbu ndị Palmarian hapụrụ ụka, mgbe mgbe ha dị afọ iri na ụma. Dị ka “ndị si n’ezi ofufe dapụ,” a naghị ekwe ka ha na ndị ezinụlọ ha ọ bụla ka nọ n’ọgbakọ na-emekọ ihe. Sgbahapụ kpamkpam bụ ụkpụrụ.
N'agbanyeghị nkwenye zuru oke nke ụwa dịpụrụ adịpụ, chọọchị Palmarian chọrọ ịbụ onye a ma ama n'okpukpe otu. N'ịgbaso mkpọsa nke iwu 1980 Spanish maka nnwere onwe okpukpe, na 1981 na ọtụtụ oge mgbe e mesịrị, ndị Palmarians tinyere akwụkwọ maka ndebanye aha nke ndị ọrụ gọọmentị Spanish nke mkpakọrịta okpukpe. Otú ọ dị, Mịnịstrị na-ahụ maka ikpe na-ekwetaghị ide ihe ugboro ugboro, n’etiti ihe ndị ọzọ n’ihi na Churchka Roman Katọlik na-achịkwa okwu ahụ bụ “Katọlik”. N'ime ngwa ndị ọzọ, ha webatara aha gọọmentị ọhụrụ, Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz. N'ihe metụtara ọchịchị, mgbe ahụ, ụka anaghị akpọ "Katọlik" kama ọ bụ "Christian".
Na 1985, ndị Palmaria tinyere akwụkwọ mkpegharị megide mkpebi nke Mịnịsta ahụ gaa n'Courtlọikpe Kasị Elu nke Spain. Na mbụ, Courtlọikpe a kpelaara ha ikpe. Otú ọ dị, na November 2, 1987, Courtlọikpe ahụ kpebiri na a pụrụ itinye ụka Palmarian n’ezie n’akwụkwọ ahụ, ebe ọ bụ na ha na-emezu ihe nile a chọrọ n’iwu maka njikọ okpukpe. Mkpebi a sochiri ọtụtụ nkatọ na mgbasa ozi Spanish na site na ụfọdụ ndị nchọpụta, bụ ndị lere anya ndị Palmarians dị ka ịrọ òtù dị ize ndụ na nzukọ achụmnta ego a na-enyo enyo, ihe ka ọtụtụ n'ime ha nwere mmasị n'ịchịkọta akụnụba.
Ọ bụ ezie na Clemente Domínguez na ndị otu gbara ya gburugburu weghaara saịtị ahụ na 1974 wee chịkwaa mmepe ngwa ngwa site na ngagharị n'ime ụka nke aka ya, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọhụụ ahụ kewapụrụ onwe ha na ha, na-achọghị pope ọzọ na ụka ọhụrụ. Taa, mmadu nwere ike ihu ocha ocha ya na eserese nke Pope Francis na azu akwa mgbidi ulo uka Palmarian. Ọ bụ Cruz Blanca: ebe a na-ezukọta maka ndị ọhụụ ahụ na-esighi na ụka Palmarian na ndị na-akwado ha. Dika data otu si di, ihe ruru mmadu iri na abuo na-ezuko n'ebe ahu kwa izu uka ikpe ekpere rosary. Ná ngwụsị izu, mmadụ iri anọ na-abịa ya. N’ememme Ista, ọtụtụ narị mmadụ na-ezukọ n’ebe ahụ, gụnyere ndị njem si mba ofesi.
Dabere na weebụsaịtị ndị otu ahụ, ọnụọgụ nke ngosipụta na Cruz Blanca na ụlọ ụka ha, Santuario del Corazón de María, site na iri afọ gara aga na-eme atụmatụ ihe dị ka 10,000 ruo ugbu a. Na mbido, ọtụtụ ndị ọhụụ ochie ahụ kwuru na ha na-enweta nkwukọrịta nke Cruz Blanca, gụnyere Pepe Cayetano na Manuel Fernández, mana na afọ ndị sochirinụ, naanị Rosario Arenillas na-ekwu na ha natara ozi. Ruo mgbe ọ nwụrụ na 2005, otu onye bụ Félix Arana, onye bụbu onye ụkọchukwu Roman Katọlik, bụ onye duziri otu ahụ na 1976 ka edoro bishọp Palmarian. Agbanyeghị, ọ nọrọ naanị ọnwa ole na ole wee megide usoro ahụ ka ọ si mepụta. Arana jere ozi dị ka onye ndú ime mmụọ nke Cruz Blanca. O dekọrọ ozi nke ndị ọhụụ, ma depụta ya, bipụta ma kọwaa ha. Ọ na-emekwa ememme Tridentine n'ụlọ ụka ahụ kwa ụbọchị.
Christ na Virgin bụ ndị na-apụtakarị na ndị ọhụụ ahụ Cruz Blanca, na-esote St. Joseph na Padre Pio. Ozi ndị ahụ na-enwekarị ngwa ngwa apocalyptic. Ha na-akatọkarị Roman Katọlik nke oge a, na-azọrọ na ọ fọrọ nke nta ka e bibie ya mgbe Vatican nke Abụọ na ọtụtụ ndị ụkọchukwu na ndị bishọp bụ ndị jụrụ okwukwe. Otú ọ dị, ọ bụghị ụta ka a ga-ata pope, ebe ọ bụ na curia na-agha ụgha n’ozi ya. N'ihi ya, Cruz Blanca na-ekwu na Pope John Paul II na ndị nọchiri ya bụ ezigbo popu, mana na ha na-ata ahụhụ dị ukwuu n'ihi ikwesị ntụkwasị obi ha. Ha na-ekwusi ike na onye ahụ na-emegide Kraịst ga-ejide Holy See, na oke agha na ọdachi ga-ebute Ọbịbịa nke Ugboro abụọ nke Kraịst ụzọ. N'ọnọdụ a, ọrụ ndị kwesiri ntụkwasị obi bụ ikpe ekpere maka pontiff na ụka, nke mere na a ga-egbochi njedebe ụwa. Naanị otu otu Cruz Blanca na ụka Palmarian, nke ha kpọrọ aha ya, "ịrọ òtù Clemente" bụ na ha na-ekpe ekpere maka ịlaghachị Churchka Roman Katọlik. N'agbanyeghị nke ahụ, dị ka a pụrụ ịhụ, ọdịnaya nke ozi ndị dị na Cruz Blanca yiri nke Clemente natara n'oge ọkara mbụ nke afọ ndị 1970.
Otu nzọụkwụ dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke ụka Palmarian ka emere na November 7, 2000, mgbe Gregory XVII chụpụrụ ndị na-erughị ndị bishọp iri na asatọ na ndị nọn asaa, na-ebo ha ebubo ịjụ okwukwe na ime atụmatụ ịkwatu pope. Fọdụ ndị a chụpụrụ malitere obodo Palmarian nwere onwe ya na Archidona, Andalusia, ndị ọzọ ga-eso ha ma emechaa. Agbanyeghị, ha ka na-ele ọhụụ mbụ Clemente anya dị ka nke ekwenyesiri ike ma kwenye na Gregory XVII bụ n'ezie ezigbo pope, na mbipụta nke Palmarian Bible, ma ọ bụ ọbụna site na etiti 1990s, ha abịawo were ya dị ka onye nzuzu onye nzuzu enwekwaghị ikike ịbụ onye popu ya. Disstù ndị ahụ na-ekwenye ekwenye siri ike na eziokwu ahụ bụ na Pope Gregory agbachiri cardinalate ahụ na 1995. Ndị ọzọ na-ekwenyeghị na-emegide mkpebi ya na 2000 ịhọrọ Papa Isidoro María dị ka onye ga-anọchi ya, na-ewepụ ohere nke conclave. Dịka e lere Gregory (na Isidoro María) anya dị ka ndị jụrụ okwukwe pụtara ìhè, ndị otu nọ na Archidona kwenyere na Holy See enwere ohere.
* Nkọwa zuru ezu nke Chọọchị nke ndị Apostolic Catholic Palmarian, nke nwere ederede ederede na usoro zuru ezu, dị na Isiokwu / Akwụkwọ Akwụkwọ nke WRSP tinyere akwụkwọ edemede, Poopu nke Onwe Ha: El Palmar de Troya na Chọọchị Palmarian.